के नेपालमा हलिउड र भेगास जस्ता शहर बनाउन सम्भव छ ? – Nepal Japan
के नेपालमा हलिउड र भेगास जस्ता शहर बनाउन सम्भव छ ?
15 March, 2017 14:00 | बिचार | comments | 111300 Views
कला क्षेत्रको स्वर्णिम सहरको रूपमा रहेको हलिउड र विश्वको मनोरन्जनको राजधानीको उपनाम, रात्रि जीवन तथा विश्व जुवा घरको रूपमा परिचित लस भेगासको नाम विश्वका अधिकांश मानिसहरूले सुनेका छन् । धेरैले यसको भ्रमण गरेका छन् भने एक पटक घुम्ने वा पुग्ने चाहना सबैले राख्दछन ।
के छ त यी सहरहरूमा, जसले मानिसलाई लोभ्याउने गरेको छ, किन हामीले गर्न सकेनौ यस्तो बिकाश र के गर्दा हामि पनि फड्को मार्न सकौला त ?
पूर्वीभागमा सिनेमा बनाउन कठिन हुने अवस्थामा अमेरिकाको पश्चिम क्षेत्रमा सहज कानुनी आधार र बस्नको लागि राम्रों वातावरणको कारण सिनेमा उद्द्योगहरु द्रुतगतिमा बढेका थिए । हलिउडको सेरोफेरोमा फिल्म बनाउने युनिभर्सल, प्यारामाउन्ट, सोनी जस्ता प्रख्यात स्टुडियोहरु लगायत फिल्म र गीत सङ्गीत सँग सम्बन्धित स्टुडियोहरु भरिपूर छन् । मुख्य सहरको नजिकै डाडामा “हलिउड” लेखिएको साइन राखिएको छ । यो साइनको फोटो लिन वा हेर्न हलिउडको मुख्य चोक र ग्रिफित अब्जरभेटरी तथा केही व्यक्ति नजिकै डाडामा समेत गएर फोटो लिने गर्दछन् । हलिउड बुलुभडको दुवै तर्फ कलाकारहरूको नाम लेखन गरिएको ताराहरू राखिएका छन् जसलाई “हलिउड वाल्क अफ फेम” भनिन्छ । यी बाहेक रात्रि क्लब, म्युजियम, थिएटर यहाँका आकर्षण हुन् ।
हलिउड ठाउँ स्वयम्ले भन्दा यहाँ बन्ने सिनेमाहरुको क्रेज, कलाकारहरूको ख्याति र गीत सङ्गीत सिनेमा उद्योगको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको कारणले बढी चर्चामा रहेको छ । हलिवुड वाल्क अफ फेममा आफूलाई मन परेको कलाकारको नाम कता छ भनेर खोज्दै फोटो खिच्न खोज्ने र आफ्नो नजिकै वा विभिन्न स्टाइलमा हलिवुड साइनलाई पार्दै फोटो खिच्न खोजिन्छ । मानिसहरूको भिड सबै ठाउँमा हुने भए पनि कोडाक थिएटर वा हलिउड-हाईल्याण्ड सेन्टर आसपासमा भिडभाड देख्न सकिन्छ । हलिउड छेउमा रहेको युनिभर्सल स्टुडियोमा जुरासिक पार्क, टर्मिनेटर जस्ता राइडहरु, फिल्म कसरी बनाउने गरिन्छ भन्ने टुर समेत गराईन्छ, जस्को भ्रमण गर्दा सिनेमा कसरी बनाउने रहेछन् भनेर सामान्य जानकारी लिन सकिन्छ ।
लस एन्जलस क्षेत्रमा घुम्ने धेरै स्थान भएता पनि नेपाल र अमेरिकाको अन्य स्थानबाट साथीभाई आउँदा हलिउड हेर्न जाउन कस्तो छ भनेर सबैले अनुरोध गरेकै हुन्छन् । कुनै स्थानमा नगए पनि हलिवुड एक पटक जाऊ भन्ने भावना सबैले देखाएबाट पनि यसमा कत्तिको क्रेज रहेको छ भनी बुझ्न सकिन्छ ।
हलिउड कला क्षेत्रको लामो इतिहासको कारण प्रख्यात भएता पनि लस भेगास नीति नियममा गरिएको परिवर्तनको कारणले अहिलेको अवस्थामा आउन सफल भएको हो । अमेरिकाका अन्य राज्यमा विवाह गर्ने प्रावधान तथा सम्बन्ध विच्छेदको लागि समय लाग्ने व्यवस्था भएको समयमा यस राज्यले सहज कानुनी व्यवस्था लागु गर्ना साथ यसको विकाशमा तीव्रता आएको हो । अहिले पनि भेगास वैवाहिक बन्धनमा बाधिनेहरुको लागि प्रख्यात रहेको छ । यहाँ विवाह गर्ने चापेलहरु अधिकांश होटेलमा छन् भने बाहिरसमेत प्रशस्त पाउन सकिन्छ ।
जब मानिसलाई एक पछि अर्को सुविधाहरू प्रदान गर्दै लस भेगास जाऊ भन्ने भावना जागृत भयो तब क्यासिनो व्यवसाय र ठुला ठुला व्यापारिक मेलाहरुको समेत आयोजना हुन थाले । यहाँ कुनै ठूला कम्पनीको शाखा भएर कार्यक्रम भएको जस्तो देखिँदैन कि आफ्ना कर्मचारीलाई लामो थकान पश्चात् मनोरंजनको साथमा कन्फेरेन्स पनि सम्पन्न गरौँ भने झैँ देखिन्छ । यहाँ हुने व्यापारिक मेलाहरुमा स्थानियहरुको भन्दा पनि आयोजक र भिजिटर सबै प्रायशः बाहिरबाट नै आएका हुन्छन् ।
हलिउड र लस भेगास दुवै सहरमा आकर्षणका केन्द्रहरु सरकारीस्तरबाट भन्दा निजी स्तरबाट बनेका छन् । सरकारले बनाएको भनेको त सही नीति नियम मात्र हो । निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पूर्वाधार र नीति नियम बनाएर दिनासाथ कुनै ठाउको स्वरूप सजिलै परिवर्तन हुन् सक्दछ ।
विश्वको आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र र उबर्दो अर्थतन्त्र बोकेका दुई देशको बिचमा रहेको मुलुकले उनीहरूमा रहेका श्रोतको परिचालन आफ्नो हितमा अधिकतमरुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी दीर्घकालीन योजना सहित आउने हो भने नेपालमा समेत हलिउड र लस भेगास जस्ता स्थानहरूको विकाश गर्दै देशको मुहार फेर्न अवश्य सक्ने देखिन्छ ।